ဇွန်လလယ်ရဲ့ တစ်ပတ်အတွင်း Youtube မှာ ထိပ်သီးငါးခုဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေက?
On June 27, 2018 July 2, 2018 By Sora
Youtube ရဲ့လောလောလတ်လတ် ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် Top ဖြစ်နေတဲ့သီချင်းငါးပုဒ်စာရင်းထဲမှာတော့ Maroon5ကရှေ့ပြေးဖြစ်နေပါတယ်။ Maroon5ရဲ့Girl Like You ဆိုတဲ့သီချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ Dua Lipa ရဲ့ IDGAF, Ariana Grande ရဲ့ No Tears Left To Cry, Marshmello & Anne- Marie ရဲ့ Friends, Calvin Harris & Dua Lipa ရဲ့ One Kiss တို့ရှိနေပါတယ်။
Maroon5ရဲ့Girl Like You ကတော့ အဝေးရောက်နေစဉ် သူ့ရဲ့ကောင်မလေးကို သတိရလိုအပ်နေတဲ့ အကြာင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းရဲ့ MV အစမှာသွေးအေးအေးနဲ့ စတင်ထားပြီး အလယ်မရောက်တစ်ရောက်လောက်မှာ မျက်စိမခွာနိုင်အောင် Hot တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ ပင်တိုင်အဆိုတော် Adam Levine ကိုတောင်ကြည့်ဖို့မေ့သွားတဲ့အထိပါပဲ။ ဘာတွေ hot သလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအားပေးလိုက်ပါနော်…..
Dua Lipa ရဲ့ IDGAF ကတော့ အရှည်ကောက်ကတော့ I Don’t Give A F*ck ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းတယ်ဟုတ်? ခေါင်းစဉ်တင်ကြမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ စာသားကလဲ တကယ့်ကို Break up ဖြစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နာမှုကို ခပ်ပြင်းပြင်းရေးဖွဲ့သီဆိုထားတာပါ။ Boy ဘက်က sorry ပါဆိုပြီး ဘယ်လိုပဲဒူးထောက်တောင်းပန်နေပါစေ လုံးဝပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ မိန်းမမာနကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင် တွေ့ရမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။
Ariana Grande ရဲ့ No Tears Left To Cry ကတော့ ခေါင်းစဉ်မြင်တာနဲ့တင် အသည်းကွဲသီချင်းမှန်းသိလောက်ပါတယ်။ Ariana တစ်ယောက် MV တစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ စာသားကသိပ်မပြင်းပေမယ့် ကောင်းမွန်ဆန်သစ်ပြီး သံစဉ်တွေကလဲ တစ်မျိုးလေးနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ MV ကတော့…………
Marshmello & Anne- Marie ရဲ့ Friends ကိုတော့သိပြီးကြမှာပါ။ ဒီသီချင်းလေးထဲမှာ Marshmello ကသူငယ်ချင်းကောင်မလေးကို အသည်းအသန်လိုက်ကြိုက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်လေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ စာသားလေးကတော့ ကောင်မလေးကလုံးဝ ချစ်သူအဖြစ်လက်မခံနိုင်ကြောင်းကို ဖွဲ့ထားတာပါ။ ခပ်မြူးမြူးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ MV လေးနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Calvin Harris & Dua Lipa ရဲ့ One Kiss ကတော့ Kiss ကိုဖွဲ့နွဲ့ထားတာပါ။ မြူးမြူးလေးဖြစ်ပြီး RS တွေနဲ့လိုက်တဲ့ သီချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ RS မဟုတ်လဲနားထောင်လို့ရပါတယ်နော်…..
Features Music NewsYouTube
PREVIOUS POST Previous post: Nicki Minaj ဆိုတာကို လုံးဝမသိပါဘူးလို့ ဗြောင်ကျကျ ပြောလာတဲ့ Lil’ Kim
NEXT POST Next post: ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ playlist မှာ ဒီလိုသီချင်းလေးတွေ ရှိထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်…